Shirka Madaxda Maamul Goboleedyada ee Kismaayo iyo shakiga laga qabo | Newsomali
Shirka Madaxda Maamul Goboleedyada ee Kismaayo iyo shakiga laga qabo
Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish ayaa sheegay ujeedka shirku yahay “Madmadoow ka dhashay dhanka dowladdii Federaalka ee Soomaaliya lagu turxaan bixiyo, oo laga wada hadlo inta aan gacmo kale iyo cid kale aysan arrinta gaarin, waxaana gogol fidiyay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, waana la isugu yimid”.
Waa madmadoowgaas uu sheegay wasiirka waxa dhaliyay shaki balaaran oo laga qabo shirkan iyo waxa kasoo bixi kara, sida uu sheegayo Xasan Xayle oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ay la weydiiyay aragtidiisa shirkan ku aaddan.
Qaar ka mid ah waftiga Hirshabeelle oo shirka ka qeybgalaya
Balse xiliga uu shirka kusoo beegmay iyo sida uu yahay dareenka siyaasadeed waxaa cabiraya Xasan Xayle oo yiri: “Waxay u egtahay in dhufeys la isu galay labada dhinac oo la jabhadaynayo, waxaanna aragnaa in abaabulka xoog siyaasadeed uu meesha ka socdo.
Dowladda shaki ayay qabtaa, mana la casuumin. Hadduu shirka mid fiicanyahay waxaa dowladda la siin lahaa door ah in ay kor joogto ka noqoto”.